Pane imwe nzvimbo ye backlink yepaiti yekudzivirira pane zvose zvinodhura?
Zvechokwadi, munhu wose anoda zvikwata zvekubatanidza pamwe nedzimwe nzvimbo dziri paIndaneti kune imwe nzvimbo yeWebhu yepamusoro yeGoogle. Dzimwe mhando dzewebsite, zvisinei, dzinofanira kudzivirirwa pamutengo wose - dzinowanzoita zvinokuvadza iwe webusaiti yako, pane kupa chero humwe huwandu hunosimudzira. Uye kune mibvunzo miviri yakawanda mumutambo wose weGoogle Engine Engine Optimization. Chokutanga pane zvose, unofunga kufunga nezvekuwanikwa kwako kumashure webasa rekutevera - iwe unogona kutarisa zviri nyore uchishandisa Google's Search Console. Uye tarirai isu tave kusvika pakupedzisira - iwe unofanirwa kuziva zvose pamusoro penzvimbo yakaipa ye backlink nhamba yemukana ane mikana yakawanda yekuzviisa mumatambudziko paunenge uchibata navo.
Zvinosuruvarisa, hazvikwanisi kuva nechimwe chinhu, kana sarudzo yekuita chisarudzo chokupedzisira-iwe uchada kushanyira webhusaiti yega iwe pachako usati wapedzisa kugadzirisa nayo. Ichokwadi, iwe unofanirwa kuzviita iwe pachako uye unotonga iwe pakupedzisira iwe mumaminitsi makumi matatu. Uye hapana rekink site yepaiti inogona kukubatsira nezvo - kwetewo yepamusoro yakakurudzirwa mawebhusayithi, kana zvishoma zvinodikanwa zvekuvakwa kwechikwata.
Uye zvechokwadi, haufaniri kuongororai webhusaiti yakatarwa chete nezvinoonekwa, kana chero imwe nzvimbo inotorwa yoga. Yeuka, pane makumi ezviuru zvepawebsite dzepa spammy dzinotarisa sezvakaita chaiyo, uye zvakasiyana-siyana - mamwe mazano makuru chaizvo ekugadzira chikwata angaita seasina asi asi spam. Ngatitarise zvakare zvakare - hapana reklin yepaiti yepaiti inogona kubatsira neizvozvo. Asi iyi ndiyo mhinduro - Ndinokurudzira kuongorora zvinhu zvose zvingava zvakanaka zvakakwana kuti zvibatane nazvo, kunze kwezvinotevera:
Kana uchienda kuti ubatane nemamwe mawebhusayithi kana mablogi, ayo anoratidza kuti haana kunyorwa muGoogle, akanganwe. Kutaura zvazviri, pane inenge 100% yevimbiso yokuti zvinyorwa zvakadaro zvatove zvakapomerwa neGoogle. Zvinoreva kuti vanofanira kunge vakashandisa maitiro asingabvumirwi nemutemo uye zviito zvekunyengera kuti vanyengere neGoogle. Iwe hauzombodi kuti webhusaiti yako ive nehuwandu huripo huchibviswa pasi, kurudyi? Kwete kureva kuti inogona kusvika pakuwedzeresa sekuvhara kwakakwana kutsvaga.
Mapeji ane Low Trust uye Weak Authority
Tarisai chero mubvunzo waunoda kubatanidza naye uchishandisa zvishandiso zvepaIndaneti zvisina ruzivo kuti uongorore avo vePA (peji peji), DA (chiremera chinzvimbo), uye PR (peji yepamusoro). Unofanira kunge uchinzwa kusasha kwekumwe kwezvinhu izvi, iwe zviri nani usakwanisa kufunga nezvemasayiti aya, zvisingaiti nekuda kwekuvakira chinangwa.
Bold Pushers uye Link Networks
Ndiri kureva kuti mawebsite kana kuti mashizha anoburitsa pachena achitaura kuti vane zvakakonzerwa zvakare kutengeswa - kunofanira kusara pane zvishoma. Zvichida, ivo vakatotora mutsvuku mutsvuku uye Google iri kuuya kwavari - zvose mawebsite asina kunaka pachavo uye navashambadziri vavo.
maIndaneti kana maBlogi ane Zvisiri izvo zvakasiyana kana zvakashata
Iva nechokwadi kuti usatarisana newebsite kana mapeji ane zvinyorwa zvisina kunyorwa zvakanyanya, zvishoma content. Usanonoka kutora mitsara kubva peji yezvinyorwa panguva dzose uye uzadze iwo muGoogle yekutsvaga bar. Kazhinji kacho, zvidzidzo zvinokonzera kana kuverenga zvinyorwa hazvisi izvo zvinotyisa kana kuti zvishoma kutengesa zvakashata zvakasungirirwa zvingave zvakasvibisa webhusaiti yako, zvinenge pasi pemamiriro ose Source .